TÜVASAŞ waxay kusii wadaysaa masaafada tareenka 7/24 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaTÜVASAŞ waxay kusii wadaysaa masaafada tareenka 7/24
25 / 01 / 2020 54 Sakarya, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, Gobolka Marmara, Tüvasas, TURKEY, VIDEO
uvasas waxay sii wadaa inay tababarto tareenka qaranka
Turkey baabuur Industry Inc. National Electric tababartay 7/24 abaabulka sii. Shaqada u gaarka ah ee shaqaalaha ku lugta leh dhismaha tareenka qaranku way sii socdaan habeen iyo maalinba. Tareenka qaran waxaa loogu tala galay inuu ku socdo wadada tareenka dhamaadka June ama July.
Turkey baabuur Industry xaaqiijiyay (TÜVASAŞ), shirkadaha shisheeye helay aqoonta wax soo saarka taxane tareen naaftada hoostiisa liisanka, iyadoo la isticmaalayo wax soo saarka taxane tareenka korontada qaranka.
Soosaarida taxanaha ah ee tareenka korontada oo ah 160 kiilo mitir saacaddiiba inta ay le'eg tahay soo saarista tusmada ayaa la rajaynayaa in la dhammeeyo badhtamaha sanadkan oo gaadiidku uu qorshaynayo in lagu soo dejiyo biraha.
Nidaamka imtixaanka iyo shahaadada ee taxanahan tareenka ayaa la soo gabagabeeyey dhamaadka sanadka waxaana loo qorsheeyay in la bilaabo wax soo saar ballaaran. Intaa waxaa dheer, Qorshaha Tareenka Qaranka ee Korantada, oo loogu talagalay in loo dhoofiyo waddamada midowga Yurub marka la gaaro 2023, waxaa loogu talagalay heerarka TSI xawaarehiisana wuxuu ka kordhay 160 km / h illaa 200 km / saacaddii.
Waxaa laga soo saaray magaalada TÜVASAŞ, Milli Tren wuxuu ku socdaa inuu noqdo kan ugu horreeya ee leh aluminiumka qaabeynta jirka. Gawaarida 160-ta ah oo leh xawaare dhan 5 km / h oo leh astaamo raaxo sare ayaa loo qaabeeyey si waafaqsan safarka udhaxeeya. Intaa waxaa u dheer, Tareenka Qaranka waxaa loo qaabeeyey inuu buuxiyo dhammaan baahiyaha rakaabka naafada ah.
Mashruuca Tareenka Qaranka oo laga bilaabayo Karakurt oo sii wadata YHT
TULOMSAS waxay sii wadaa safarkeeda Tareenka Qaranka
TCDD: Tareenada labada dhinac ayaa sii socota
Xarunta tareenka tuulada Turkic, cusbooneysiin ayaa ku shaqeyneysa
Sivas ayaa sii wadi doona inay u codeeyaan mashaariicda tareennada xawaare sare